Abaholi bendabuko bathi cha kuma-sanitisers uma besokisa | Scrolla Izindaba
Abaholi bendabuko bathi cha kuma-sanitisers uma besokisa
Abaholi bendabuko base-Eastern Cape bayakwenqabela ukusetshenziswa kwama-sanitisers ezikoleni zokusoka.
INkosi uMwelo Nonkonyana, onguSihlalo wesifundazwe sase-Contralesa e-Eastern Cape, unxusa iingcibi, amakhankatha nabazali ukuthi bangasebenzisi ama-sanitisers ezikoleni zokusoka.
Uthi engabanga ingozi kulabo abasokwayo, ngoba ayashesha ukubamba umlilo futhi labo abasokwayo basebenzisa imililo waphansi.
UNonkonyana ukhulume nabakwa-Scrolla.Afrika ngoLwesihlanu ekuseni ngemuva kokuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ekhiphe isinqumo sokuthi kusokwe ehlobo kwezinye izingxenye zesifundazwe – ngaphansi kwemithetho eqinile ye-Covid-19.
“Sijabule kakhulu ngalesi simemezelo futhi kufanele sidlale indima yethu ekuqinisekiseni ukuthi kulandelwa imithetho yokusoka neye-Covid-19,” uyasho.
Uyakwamukela ukuqhelelanna kwabantu emphakathini, futhi uyavuma ukuthi “ingcibi kanye namakhankatha kumele bahlolelwe i-Covid-19”.
Kodwa udweba umugqa kuma-sanitisers.
“Ama-sanitisers awavumelekile ngoba aqukethe utshwala obungavutha. Abasokwayo basebenzisa imililo waphansi futhi izindlu zotshani zingasha kalula,” kusho uNonkonyana.
INkosi uVelile Mfunda ongusihlalo wabaHoli beNdabuko esifundeni sase-Cacadu wengeze wathi: “Ama-Sanitisers abangela ukulunywa uma usikwe esandleni. Ngakho-ke sinxusa ingcibi namakhankatha ukuthi bangawasebenzisi ezikoleni zokusoka ngoba bangalimaza inqubo yokuphola kwabasokayo.
“Kumele bageze izandla zabo ngensipho namanzi, bagqoke izifonyo futhi bahambisane nemithetho yeyokuqhelelana.”